Tabernakeri yakanga iri mumvuri waJesu Kristu, uyo wakaregerera zvivi zvavaIsraeri, nezveavo vose vanotenda kwaari. Ishe wedu vakanga vari zvakare muridzi weTabernakeri. Vakanga vari Muponesi uyo wakadzima zvivi zvevanhu vose, kamwechete, uye panguva imwecheteyo, uye ndiye chipiriso chokubaira chevanhu vose.
Kunyange zvazvo vanhu veIsraeri vaitadza zuva nezuva, kuburikidza nokuisa mavoko pamusoro wemhuka yechibairo isina zvivi, muruvazhe rweTabernakeri, sezvinotevera tsika yokubaira; vaikwanisa kutambidza zvivi zvavo kuchipiriso. Aya ndiwo magamuchirirwo ayiitwa kuregererwa kwezvivi, pamwevo nokushambidzwa kwezvivi zvichiva sechando, kune avo vaitenda mubato revaprista uye nemuchipiriso chekubaira, icho chaipirwa sezvinobva patsika yokubaira. Saizvozvovo, kuburikidza nokutenda murubhapatidzo, uye nomukubairwa kwaJesu, uyo anova mumvuri weTabernakeri, vanhu vaIsraeri pamwe neavo vedu vari vaHedeni, takafukidzirwa mumaropafadzo ekuregererwa kwezvivi zvedu zvose, tichizova nokurarama naShe nokusingaperi.
Kwete vaIsraeri badzi, asi nevaHedeni vose, vanogona kusunungurwa pazvivi zvavo zvose, kuburikidza nokutenda muna Jesu, Ishe weTabernakeri. Tabernakeri inotidzidzisa kuti chipiwa chekuregererwa kwezvivi, icho chakapiwa kuvanhu vose naMwari, ndechipi. Saizvozvo, Tabernakeri pachayo yakanga iri mumvuri waJesu Kristu.
Jesu akava Muponesi wevatadzi. Mutadzi wose, zvisinei nokuti ndiyani, anogona kusava nezvivi, kuburikidza nokungotenda murubhapatidzo rwaJesu, nemuropa rake repaMuchinjikwa, uye nemuzvokwadi yekuti iye pachake bndiye Mwari. Tinogona kudzikinurwa pakutonga kwaMwari kuburikidza nokutenda kwedu kuzvakarukwa zvitema, nezvishava nezvitsvuku, uye nekuvumwari bgwake. Jesu ndiye mukova weHumambo hweKudenga.
Mabasa 4:12 inoti, “Nokuti hakuna kuponeswa kunomumwe; nokuti hakunerimwe zita pasi pedenga, rakapiwa pakati pevanhu, ratingasunungurwa naro.” Hakuna mumwe, kunze kwaJesu, ungagona kuponesa vanhu vose pazvivi zvavo. Hakuna mumwe muponesi kunze kwaJesu. Johane 10:9 inoti, “Ndini mukova; kana munhu apinda neni, uchaponeswa, uchapinda, uchabuda, uchawana mafuro.” 1 Timotio 2:5 inoti, “Nokuti kunongova naMwari mumwechete, noMureveri mumwechetevo, pakati paMwari navanhu, ndiye Munhu Kristu Jesu;” uye Mateo 3:15 inotaura kuti, “Asi Jesu akapindura, akati kwaari: Chirega hako zvino, nokuti saizvozvo zvakafanira kuti tizadzise kururama kwose.” Magwaro ose awa anopupurira zvokwadi iyi.
Jesu wakavuya panyika pano nemufananidzo wenyama yemunhu, uye kuburikidza nokugamuchira rubhapatidzo rwake (zvakarukwa zvitema/blue) uye nokudeura ropa rake (zvakarukwa zvitsvuku), wakaponesa vatadzi. Saizvozvo, Jesu unova mukova weruponeso wevatadzi vose. Sekugadzirwa kwakanga kwakaita mukova weTabernakeri nezvakarukwa zvitema, nezvishava uye nezvitsvuku, Jesu, achivuya panyika, wakatanga atorera zvivi zvenyika kwaari, nerubhapatidzo rwaakagamuchira kubva kuna Johane Mubhapatidzi. Naizvozvo, wakava chipiriso chekubaira, iye Gwayana raShe (Johane 1:29).
Chechipiri, mushure mekutorera kwaari kudarika kwose kwevatadzi, nerubhapatidzo rwake, wakafa pachinzvimbo chavo, uye wakapa vupenyu bgutsva kune avo vanotenda. Chechitatu. Jesu uyu wakanga ari Mwari pachake. Genesi 1:1 inoti, “Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika,” uyevo Genesi 1:3 inoti, “Mwari akati: Chiedza ngachivepo, chiedza chikavapo.” Jesu akanga asiri umwe, kunze kwaMwari wezviratidziro, uyo wakasika nyika nezvose zviri mairi, neShoko rake.
Mwari wakaraira Mosesi kuti agadzire mukova wechivanze cheTabernakeri nezvakarukwa zvitema, zvishava, uye nezvitsvuku, uye nemucheka wakaisvonaka wakarukwa. Jesu, uyo anova Mwari pachake, wakazadzisa basa rake rokuti vatadzi vave vatsvene, kuburikidza nokuvuya panyika nomufananidzo wenyama yemunhu, uye nokuponesa vanhu vake pazvivi zvavo, kuburikidza nerubhapatidzo uye nekufira kwake paMuchinjikwa. Aya mapato maviri aya ndiyo nzira iyo kuburikidza nayo, Kristu wakaponesa vatadzi, uye ndiwo humbowo hwezvokwadi iyi.
MuApostora Pauro akataura muna VaEfeso 4:4-6, kuti, “Kuno muviri mumwe, noMweya mumwe, sezvamakadanwavo mutariro imwe yokudanwa kwenyu; Ishe mumwe, nokutenda kumwe, norubhapatidzo, naMwari mumwe, naBaba vavose, uri pamusoro pavose, unobata navose, uri mukati mavose.” Iri Shoko rinoreva ruponeso rwepazvivi urwo rwakagadzirwa nezvakarukwa zvitema, nezvishava uye nezvitsvuku, uyevo nemucheka wakaisvonaka, wakarukwa.
Kuburikidza nokucherechedza kwedu Tabernakeri, tinofanira kuziva zvokwadi yayo chaiyo, uye nokudaro tigoropafadzwa kuti tive nokuregererwa pazvivi zvedu zvose.
Sarudza, kubva pazvikamu zvinotevera, bhuku remifananidzo yeTabernakeri (yaunoda kuvona), uye ugoverenga mharidzo dzinoenderana nomufananidzo woga woga.
Mukova weRuvazhe rweTabernakeri
Artari yeZvipiriso Zvinopiswa
Mudziyo Wokushambidzira Wendarama
Chigadziko Chemwenje Chendarama
Tafura yeZvingwa Zvokuratidza